Amụma nzuzo. Okwu na Ọnọdụ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
IHE OMUMU NIILE
Emelitere ikpeazụ: 10 Septemba 2018
At nkwụsịsa, anyị kpebisiri ike ichebe nzuzo gị dị ka onye ahịa na onye ọbịa na ntanetị na webụsaịtị anyị. Anyị na-eji ozi anyị nakọtara gbasara gị iji bulie ọrụ anyị na-enye gị. Anyị na-akwanyere nzuzo na ozi nzuzo nke ị nyere gị ma rube isi na ụkpụrụ nzuzo nke Australia. Biko gụọ iwu nzuzo anyị n'okpuru nke ọma.
Ozi anyi dere anyi
Mgbe ị na-eleta weebụsaịtị anyị ma ọ bụ iji ngwaahịa na ọrụ anyị, anyị nwere ike ịnweta ozi ndị a gbasara gị: aha, ụlọ ọrụ, adreesị ozi-e, akara ekwentị, nkọwa kaadị akwụmụgwọ, adreesị ịgba ụgwọ, ọnọdụ mpaghara, adreesị IP, nzaghachi nyocha nyocha, ajụjụ nkwado, ajụjụ banyere blog na mmekọrịta mmadụ na ibe ya (ọnụ 'Personal Data').
Achọghị ọrụ anyị na ndị nọ n'okpuru 18 anyị anaghị akpachara anya na-anakọta Data Nkeonwe n'aka onye ọ bụla n'okpuru 18. Ọ bụrụ na anyị mata na nwatakịrị nọ n'okpuru 18 enyela anyị data Nkeonwe, anyị ga-ehichapụ ozi ahụ ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye na-elekọta nwatakịrị ma kwenyere na ha nyere anyị data nkeonwe na-enweghị nkwenye gị, biko kpọtụrụ anyị.
Can nwere ike nyocha, mezie, melite ma ọ bụ hichapụ data Nkeonwe gị site na ịbanye na akaụntụ gị ma mee mgbanwe ndị ahụ n'onwe gị ma ọ bụ ịkpọtụrụ anyị iji mee nke ahụ.
ANYA KA ANY US NA EGO
Ozi Nkeonwe: Anyị na-eji ozi anyị nakọtara iji nyefee gị ọrụ gị, gụnyere: ịgwa gị okwu, inye gị nkwado teknụzụ, ịgwa gị mmelite na ntinye, ịkekọrịta ọdịnaya bara uru, ị nweta afọ ojuju ndị ahịa, ịchọpụta nsogbu na ịnye gị ahaziri iche. ahụmịhe weebụ.
A na-ezitere gị nkwukọrịta ahia maka ịchọrọ ịrịọ ma ọ bụ debanyere aha ha. Nwere ike ịpụ na nkwukọrịta ahịa anyị n'oge ọ bụla site na ịdebanye aha ma ọ bụ jiri email gaa na arịrịọ gị ga-eme ihe ozugbo.
Ozi Na-abụghị Amaghị Onwe Ya: Anyị na-ejikwa ozi anyị nakọtara n'ụdị nchịkọta na ịkọwa iji melite ọrụ anyị, gụnyere: ijikwa weebụsaịtị anyị, mepụta akụkọ na nyocha, na-akpọsa ngwaahịa na ọrụ anyị, na-achọpụta ihe ndị ọrụ chọrọ na inye aka na-egbo mkpa ndị ahịa n'ozuzu ya. .
Ihe omuma o bula ichoro ime ka o doo anya n’ihu ọha, dika ihe ekwuputara na ịba ama na ntanetị, ga-adịrị ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’iji wepụ ozi a, o nwere ike ịbụ ihe ndebiri edepụtara n’elu peeji ndị ọzọ ma ọ bụ chebe ma ọ bụ chekwaa ozi ndị ọzọ.
Ọnọdụ na nchekwa ozi gị
Anyị ga-eji ụzọ ezi uche niile iji kpuchido nzuzo nke Data Nkeonwe gị mgbe anyị nọ ma ọ bụ na-ejide. A na - echekwa ozi niile anyị natara n’aka gị ma chebe ya na sava anyị echekwara site na iji ya ma ọ bụ nweta ya n'enweghị ikike. Edebere ozi kaadị akwụmụgwọ tupu enyefe ma ọ bụ anyị echekwara ya na sava anyị.
Iji mee ka anyị nyefee ọrụ anyị, anyị nwere ike ibuga ozi anyị nakọtara gbasara gị, gụnyere Nkeonwe, n'ofe oke maka nchekwa na nhazi na mba ndị na-abụghị Australia. Ọ bụrụ na ebufee ma dezie data nkeonwe gị na mpụga Australia, a ga-enyefe ya naanị na mba ndị nwere nchekwa nzuzo zuru oke.
Anyị na-ejide ozi nkeonwe gị ruo oge niile ịchọrọ iji nye gị ọrụ yana ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji soro na ọrụ anyị, dozie esemokwu ma mejupụta nkwekọrịta anyị.
Yabụ na enwere ngabiga nke nchekwa anyị ma mebie data nkeonwe gị, anyị ga-agwa gị ozugbo na iwu nke dị.
Akwụkwọ NA PIX
Kuki bụ obere faịlụ etinye n'ime ihe nchọgharị weebụ gị na-anakọta ozi gbasara omume nchọgharị weebụ gị. Iji kuki na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ kwekọọ nhazi ya na mkpa gị na mmasị gị. Kuki anaghị enweta ozi echekwara na kọmputa gị ma ọ bụ data nkeonwe gị (dịka aha, adresị, adreesị ozi-e ma ọ bụ akara ekwentị). Imirikiti ihe nchọgharị weebụ na-anabata cookies ozugbo mana ị nwere ike ịhọrọ ịjụ kuki site na ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị. Nke a nwere ike, mee ka ị ghara iji webụsaịtị anyị niile.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị na-eji kuki iji nyochaa okporo ụzọ mkpokọta, nye ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na ịchọrọ arụmọrụ ma nyere anyị aka ị nweta ahụmịhe nleta weebụ kachasị mma. Na mgbakwunye, enwere ike iji kuki na pikselụ mee ka mgbasa ozi dị mkpa nye ndị ọbịa na saịtị ahụ site na ọrụ ndị ọzọ dị ka Google Adwords na Facebook Mgbasa ozi. Mgbasa ozi ndị a nwere ike ịpụta na weebụsaịtị a ma ọ bụ weebụsaịtị ndị ọzọ ị gara.
SHKPATARA INWETA N'AGBARA Usoro ITA
Anyị anaghị ma ere ma ọ bụ zuo ya na Data Nkeonwe ma ọ bụ ozi ndị ahịa ọ bụla.
A na-ekpughere ndị na - enye gị ihe nzuzo ndị ọzọ mgbe ndị ahịa chọrọ ya, maka ngwongwo ma ọ bụ nke ị zụrụ, maka nhazi ụgwọ ma ọ bụ iji kpuchido nwebiisinka, ụghalaahịa na ikike iwu ndị ọzọ. Ruo n’otu anyị na-enye ndị ọrụ na-ekere òkè data nkeonwe gị, anyị ga-eme ya ma ọ bụrụ na otu ahụ ekwenyero ịgbaso ụkpụrụ nzuzo anyị dị ka akọwara na iwu nzuzo a yana usoro iwu dị. Nkwekọrịta anyị na ndị ọzọ gbochiri ha iji data nkeonwe gị maka ebumnuche ọzọ na-abụghị nke ekesara ya.
Nyochaa ihe ọmụma gị
Anyị nwere ike ịkọwa ozi ụfọdụ, site n'oge ruo n'oge ruo oge ụfọdụ, nke nwere ike ịgụnye Personal Onwe Gị, iji gbasoo ihe iwu chọrọ, dị ka iwu, usoro, ịtụ ụlọ ikpe, akwụkwọ ikike, nye ikike, mgbe ị na-aga n'ihu ma ọ bụ na nzaghachi. gaa na ụlọ ọrụ mmanye iwu chọrọ. Ọzọkwa, anyị nwere ike iji Data nkeonwe gị kpuchido ikike, ihe ma ọ bụ nchekwa nke nkwụsịsa, ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ ngbanwe nke njikwa na azụmaahịa anyị (ma ọ bụ na njikọ, ire, mbufe akụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ) ozi ndị ahịa, nke nwere ike ịgụnye data nkeonwe gị, enwere ike ibufere onye zụrụ ya n'okpuru nkwekọrịta nzuzo. Naanị anyị ga-ekpughe Data nkeonwe gị na ezigbo okwukwe yana ebe ọnọdụ ndị a dị n'elu chọrọ.
Njikọ gaa n'ebe ndị ọzọ
Weebụsaịtị a nwere ike ịnwe njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Emepụtara njikọ ndị a maka ịdị mma gị naanị. Njikọ webụsaịtị ndị ọzọ anaghị eme nkwado ma ọ bụ nkwenye ma ọ bụ nnabata nke weebụsaịtị ndị a. Biko mara na anyị anaghị ahụ maka omume nzuzo nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ịmara, mgbe ha hapụrụ weebụsaịtị anyị, gụọ nkwupụta nzuzo nke weebụsaịtị ọ bụla na-anakọta ozi nkeonwe. Iwu nzuzo a na-emetụta naanị ozi nke weebụsaịtị a anakọtara.
GBANWEE N'IRI ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Dịka anyị na-eme atụmatụ ijide n'aka na iwu nzuzo anyị ka dị ugbu a, iwu a ga-agbanwe. Anyị nwere ike gbanwee iwu a n'oge ọ bụla, na naanị uche anyị na mgbanwe niile ga-adị irè ozugbo anyị biputere mgbanwe ndị dị na weebụsaịtị a. Biko laghachite kwa oge ka itughari iwu nzuzo anyi.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ nchegbu mgbe ọ bụla gbasara iwu nzuzo anyị ma ọ bụ ojiji nke Data Nkeonwe gị, biko kpọtụrụ anyị na https://www.stopsafeschools.com/contact anyị ga-azaghachi n’ime awa 48.
Biko gụghee usoro ndị a na ọnọdụ iji ego ngwa ngwa tupu ijiri webselị a.
Nabata na weebụsaịtị anyị. Ọ bụrụ n'ịnọgide na-achọgharị ma jiri weebụsaịtị a, ị na-ekwenye na irube isi na usoro ojiji ndị a, yana iwu nzuzo anyị na ndị na-achọpụta mkpokọta weebụ na-achịkwa. nkwụsịsaMmekọrịta gị na gị n'ihe metụtara ojiji nke weebụsaịtị a.
Site n'iji weebụsaịtị a, ị na-egosi nnabata gị nke usoro na usoro ojiji a. Maka ebumnuche nke usoro ndị a na “ọnọdụ” anyị, “anyị” na “Anyị” na-ezo aka nkwụsịsa yana “” ”na“ nke gị ”na-ezo aka na gị, onye ahịa, onye ọbịa, onye na-edebe ihe ma ọ bụ onye na-eji weebụsaịtị anyị.
Anyị na-edobe ikike ịgbanwe, gbanwee, tinye ma ọ bụ wepu akụkụ ụfọdụ nke usoro ndị a n'oge ọ bụla. Biko lelee usoro ndị a mgbe niile tupu iji weebụsaịtị anyị iji hụ na ị ma mgbanwe ọ bụla. Anyị ga-agba mbọ gosipụta mgbanwe ọ bụla dị mkpa ma ọ bụ nnukwu ihe enyere gị ebe enwere ike. Ọ bụrụ na ịhọrọ iji websaịtị anyị, anyị ga-ewere ojiji ahụ dị ka ihe akaebe nke nkwekọrịta gị na nnabata nke usoro ndị a ga - achịkwa nke gị nkwụsịsaIkike nile na ọrụ dịịrị onye ọ bụla ọzọ.
O bu ihe nkpa n’iru gi iji websaịtị anyi ikwenye ma nabata nke ahu nkwụsịsa esighi n'aka maka ihe ọ bụla mebiri ma ọ bụ mebi ihe ọ bụla ị nwere ike ịnwe metụtara weebụsaịtị, ma ọ bụ site na njehie ma ọ bụ ihe mgbaze na dọkụmentị ma ọ bụ ozi anyị, ngwongwo ma ọ bụ ọrụ anyị anyị nwere ike ịnye ma ọ bụ site na ojiji ọ bụla. Nke a gụnyere iji ma ọ bụ ịdabere na ọdịnaya nke ọ bụla, njikọ, ntinye ma ọ bụ mgbasa ozi. Ojiji nke, ma ọ bụ dabere na ozi ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị dị na weebụsaịtị a bụ ihe ndị na-agaghị achọta gị.
Ọ ga-abụ ọrụ nke gị iji hụ na ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ozi ọ bụla dị na webụsaịtị a wee mezuo etu esi akọwa ihe gị. You kwenyere na ozi na akụrụngwa dị otú ahụ nwere ike ịnwe ezughị ezu ma ọ bụ njehie ma anyị na-ewepu ibu dị ka amaghi ama ọ bụla ma ọ bụ njehie dị ka iwu enyere.
Mmekorita NA Nmekorita ihe
Maka ebumnuche Schetọ oge 2 nke Iwu Ahịa Australia, na nkebi nke 51 ruo 53, 64 na 64A nke Akụkụ 3-2, Nkebi 1, Nkewa A nke Asọmpi na Nzube Iwu 2010 (Cth), nkwụsịsaMkpuchi nke nkwekọrịta ọ bụla maka nkwekọrịta nke nkwekọrịta a bụ naanị: ịnye gị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ọzọ; nnọchi nke ngwongwo; ma obu ugwo onu ahia nke inweta ihe ma obu oru aka enyere gi ozo.
Mustkwesiri gafee afọ 18 ka ijiri webụsaịtị a wee zụta ngwa ahịa ma ọ bụ aka ọrụ ọ bụla.
NSO OZI OMA
Enwere ike iburu ngwongwo anụ ahụ site na Australia Post na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye nkwado aha. A na-ahazi ndị na-ebugharị ngwa ahịa ozugbo nnata ego zuru ezu. Inye nnyefe nwere ike iwe n'etiti ụbọchị 2 na 14, dabere na nhọrọ nnyefe. Iwu ndị mebiri emebi ma ọ bụ nke furu efu kwesịrị idozi ya na Australia Post ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebu ozi ozugbo ma anyị anaghị ahụ maka ngwongwo mebiri emebi n'ụzọ ma ọ bụ anataghị. Dochie anya ihe ndị mebiri emebi ma ọ bụ furu ụzọ bụ nke a nkwụsịsa.
Ana-ebunye ngwongwo dijitalụ ozugbo. Biko mara na enwere ihe ọghọm dị na jikọtara sọftụwia ọ bụla na ngwongwo dijitalụ. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọrụ nka ọ bụla ị na - ebudata ngwa ahịa nke ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị ka anyị nwee ike ịnyere gị aka.
NSOGBU EGO NA EGO
nkwụsịsa emeghachiri ma mekwaa usoro nkwụghachi dị na iwu Nchedo Ahịa Australia.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị iweghachi iwu gị, biko mee ka anyị mata n’ime ụbọchị izu ahia nwere ezigbo ihe maka ịlaghachi. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike idozi mkpesa gị ma ọ bụ nyere gị aka ọzọ, anyị ga-edozi nkwụghachi mgbe nnata nke ngwa ahịa zụrụ n'oge. A ga-akwụghachi ngwongwo na-amaghị. A ga-ahazi nkwụghachi ọsọsọ ma kwụọ ụgwọ site n'otu usoro ị kwụrụ. A na-eme nkwụghachi niile na uche nke nkwụsịsa.
nkwụsịsa nwere ike site na oge ọ bụla site na weebụsaịtị ya, njikọ ya na weebụsaịtị ndị ọzọ, mgbasa ozi na ozi na weebụsaịtị ndị ahụ maka ịdị mma gị. Nke a apụtaghị na nkwado, nkwado, ma ọ bụ nnabata ma ọ bụ nhazi n'etiti nkwụsịsa na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ. nkwụsịsa anaghị eburu ibu ọrụ maka ọdịnaya ọ bụla achọtara na weebụsaịtị ndị jikọtara.
nkwụsịsaWeebụsaịtị nwere ike ibu ozi ma ọ bụ mgbasa ozi nke ndị ọzọ nyere maka nke a nkwụsịsaanaghị anabata ibu ọrụ ọ bụla maka ozi ọ bụla ma ọ bụ ndụmọdụ ọ bụla nke ndị ọzọ nyere gị ozugbo. Anyị na-eme 'nkwanye' naanị ma anyị anaghị enye ndụmọdụ ọ bụla ma ọ bụ na anyị anaghị eburu ibu ọrụ ọ bụla maka ndụmọdụ ọ bụla enyere aka na nke a.
Ruo ókè iwu kwadoro, nkwụsịsa na-egosipụtapụ ikike niile, egosiri ma ọ bụ nke na-egosi, gụnyere gụnyere mana anaghị ejedebe na, akwụkwọ ikike enyere ahia na mma maka ebumnuche ọ bụla. nkwụsịsa adịghị enye ikike ọ bụla na akwụkwọ, ngwongwo ma ọ bụ ọrụ agaghị adị na njehie, ma ọ bụ na a ga-emezi ntụpọ, ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ anyị ma ọ bụ sava ya enweghị nje ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emerụ ahụ.
Ebe anyị, oge niile na-agba mbọ ịnwe ozi kacha mma, nke ntụkwasị obi ma dị ọhụrụ na weebụsaịtị anyị, anyị anaghị enye ikike ma ọ bụ mee ihe nnọchite ọ bụla gbasara ojiji ma ọ bụ nsonaazụ nke iji akwụkwọ ọ bụla, ngwaahịa, ọrụ, njikọ ma ọ bụ ozi na weebụsaịtị ya ma ọ bụ maka izizi ha, mma, izi ezi, ntụkwasị obi, ma ọ bụ ihe ọzọ.
Ọ bụ naanị ọrụ dịịrị gị ọ bụghị ibu ọrụ nke nkwụsịsa iburu ụgwọ ọrụ niile, na arụzi, ma ọ bụ mmezi. Iwu ọdabara na steeti gị ma ọ bụ ókèala gị agaghị anabata ikewapụ ndị a, ọkachasị napụtara nke ụfọdụ akwụkwọ ikike enyere. Offọdụ n'ime ihe ndị a dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị mana ị ga-agba mbọ hụ na ị maara ihe egwu ọ bụla ị nwere ike iburu site na iji weebụsaịtị a ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enwere ike ị nweta site na ya. Ọ bụ ọrụ gị ime otú ahụ.
At nkwụsịsa, anyị gbara mbọ ikpuchido nzuzo gị. Anyị na-eji ozi anyị nakọtara gbasara gị iji bulie ọrụ anyị na-enye gị. Anyị na-akwanyere nzuzo na ozi nzuzo nke ị nyere gị ma rube isi na ụkpụrụ nzuzo nke Australia. Biko gụọ nke ọma Nzuzo Nzuzo anyị nke ọma.
May nwere ike ịgbanwe nkọwa gị oge ọ bụla site na ịdụ anyị ndụmọdụ site na email. Ozi niile anyị na-enweta n’aka ndị ahịa anyị bụ nke sava anyị na-echekwa. nkwụsịsangwanrọ nchekwa ngwanrọ na - ezoro ezoro ozi ndị ahịa niile tupu e zitere anyị ya. Na mgbakwunye, data data ndị ahịa anakọtara echebere iji ya ma ọ bụ nweta ohere na-enweghị ikike. Edebeghi ihe omuma nke kaadị kredit site n’aka anyị.
NDỊ OTÚ NDỊ
Anyị anaghị ma ọ bụ na-ere ma ọ bụ na-ere ozi nkeonwe ma ọ bụ nke ndị ahịa. Anyị nwere ike iji na ọnọdụ izugbe na-enweghị aha ọ bụla maka aha gị, ozi gị iji mepụta ọnụ ọgụgụ ahịa, mata ihe ndị ọrụ chọrọ ma nye aka n'ịhụ mkpa ndị ahịa n'ozuzu ya. Na mgbakwunye, anyị nwere ike iji ozi ị nyere iji melite weebụsaịtị na ọrụ anyị mana ọ bụghị maka ojiji ọ bụla.
NWAANY OF NA-EGO
nkwụsịsa enwere ike ịchọ, n'ọnọdụ ụfọdụ, iji kpughee ozi na ezigbo okwukwe na ebe nkwụsịsaAchọrọ ka eme ya n'ọnọdụ ndị a: n'iwu ma ọ bụ ụlọ ikpe ọ bụla; manye usoro nke nkwekorita nke ndi ahia anyi; ma ọ bụ iji kpuchido ikike, ihe ma ọ bụ nchekwa nke ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị ọzọ.
NKPURU NIILE EGO
Ọ bụrụ n’ị na-azụ ahịa nke ịmepụta akwụkwọ, ngwongwo ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ maka ebumnuche ịnye ha maka ego maka ndị ọrụ, ma ha bụ ndị ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ ndị ọrụ ụlọ, mgbe ahụ ị bụ onye asọmpi nke nkwụsịsa. nkwụsịsa wezuga ya kpam kpam ma gharakwa inye gị ohere iji ma ọ bụ nweta weebụsaịtị anyị, ibudata akwụkwọ ma ọ bụ ozi ọ bụla na weebụsaịtị ya ma ọ bụ nweta ụdị akwụkwọ ma ọ bụ ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị mebie okwu a mgbe ahụ nkwụsịsa ga-ejide gị nke ọma maka ọghọm ọ bụla nke anyị nwere ike ịkwado ma nwekwaa ịta gị ụta maka uru niile ị ga - erite site na iji ụdị na-akwadoghị ma ọ bụ adịghị mma. nkwụsịsa Onye nweere ikike ịnwe ịgọnahụ ma gọnarị onye ọ bụla ịbanye na weebụsaịtị, ọrụ ma ọ bụ ozi na naanị uche anyị.
COPYRIGHT, TRADEMARK NA Ihe EGO NA-AKPATA EGO
Weebụsaịtị a nwere ihe anyị nwere ma ọ bụ ikike nyere anyị. Ihe a gụnyere, ma ọnweghị oke, imewe, okirikiri, anya, ọdịdị, ụghalaahịa na eserese. Anaghị enye gị ikike ịmepụtagharị akwụkwọ, ozi ma ọ bụ ihe dị na weebụsaịtị maka ire ma ọ bụ ojiji nke ndị ọzọ. Enweghị ikike ị regharị, bulite, bufee elektrọn ma ọ bụ kesaa ma ọ bụ kesaa ihe ọ bụla, akwụkwọ ma ọ bụ ngwaahịa enwere ike ịnwe nbudata site n'oge ruo n'oge na webụsaịtị a.
nkwụsịsa na-echekwa ikike nwebisiinka na ụghalaahịa niile nke akwụkwọ, ozi na akụrụngwa na weebụsaịtị anyị, anyị na-edobe ikikere ime ihe megide gị ma ọ bụrụ na ị mebie otu n'ime usoro ndị a.
A machibidoro idegharị ma ọ bụ imepụtaghachi akụkụ nke ma ọ bụ ọdịnaya niile n'ụdị ọ bụla na - esote: ị nwere ike bipụta ma ọ bụ budata ihe ndọtị diski mpaghara gị maka ojiji nkeonwe gị na nke na-abụghị nke azụmahịa. inwere ike idetuo ọdịnaya a na ndị ọzọ maka otu esi eme ha, mana naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyere na weebụsaịtị dị ka isi okwu ahụ.
Usoro ndị a na-anọchite anya nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na nkwụsịsa gbasara otu esi abanye gị nkwụsịsaWeebụsaịtị gị na ojiji gị wee banye na dọkụmentị na ozi dị na ya. Agaghị etinye okwu ọ bụla ọzọ na nkwekọrịta a belụsọ ebe achọrọ ka etinye ya na iwu ọ bụla nke Commonwealth ma ọ bụ Steeti ma ọ bụ Ógbè ọ bụla. Okwu nile ekwesiri ma ewezuga ndị nke iwu na-egosi na enweghị ike iwepu kpamkpam, eweghị wepụta nke a.
NKPURU EGO NA-AKPATA UNUTA
N’ebe ahịrịokwu ọ bụla ma ọ bụ okwu dị elu nke iwu ọ bụla nwere ike ịbụ nke iwu na-akwadoghị, enweghị isi ma ọ bụ ghara ịgbagha ọ bụla na Steeti ma ọ bụ Ókèala a, a gaghị etinye okwu a na steeti ahụ ma ọ bụ Ókèala a ma chee na ọ gaghị agbanye na usoro ndị a. Steeti ma ọ bụ Ókèala ahụ. Okwu dị otú a ma ọ bụrụ na usoro iwu na mmejuputa ya na Steeti ma ọ bụ Ókèala ọ bụla ga-anọgide na-emejuputa ya na akụkụ nke nkwekọrịta a na steeti ndị ọzọ na Ógbè Ha. Nwepu doro anya nke okwu ọ bụla dabere na paragraf a agaghị emetụta ma ọ bụ gbanwee ọrụ mmejuputa iwu na nrụpụta nke usoro ndị ọzọ nke usoro ndị a.
Nkwekọrịta a na webụsaịtị a nọ n'okpuru iwu nke VICTORIA na Australia. Ọ bụrụ na esemokwu dị n’etiti gị na nkwụsịsa na-ebute ịgba akwụkwọ mgbe ahụ ị ga-edo onwe gị n'okpuru ikike nke ụlọ ikpe nke VICTORIA.